यि बाबुले आफ्नो सम्पत्ती कुकुरको नाममा गरिदिए, कुकुरको सेवा गर्नेले सम्पत्ती पाउँछ भन्दै छोरालाई दिए चुनौती – Sanjal Nepal
Homeसमाचारयि बाबुले आफ्नो सम्पत्ती कुकुरको नाममा गरिदिए, कुकुरको सेवा गर्नेले सम्पत्ती पाउँछ भन्दै छोरालाई दिए चुनौती
December 31, 2020 admin समाचार 1607
एजेन्सी । आफुले जन्मदिएका छोराहरुले वेवास्ता गरेपछि एक वृद्ध पुरुषले आफ्नो सबै सम्पत्ती श्रीमती र कुकुरको नाममा आधा आधा भाग लगाइदिएका छन् । सम्पत्तीकै लागि छोराहरुले बुवाआमाको अपमान गर्ने गरेपछि उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।
यो घटना भारत मध्य प्रदेशको छिन्द्वारामा भएको हो । उनी एक किसान हुन् । आफ्ना छोराको व्यवहारबाट दिक्क परेका उनले आफ्नो सम्पत्तीको आधा आफ्नो कुकुर ज्याकी र आधा पत्नी चम्पाको नाममा नामसारी गरिदिएका छन् । किसानको यस्तो निर्णयबाट सबै छक्क परेका छन् ।
बादीबाडा गाउँका किसान ओम नारायणले आफ्नो कुकुरको वफादारीताका लागि राम्रो इनाम दिए । उनले कुकुरले जति पनि छोराछोरीले वफादारी नदेखाएको भन्दै छोराछोरीकै अगाडी कुकुरलाई आफ्नो सम्पत्तीको आधा हकदार बनाइदिए । किसानले आफ्नो सम्पत्तिको आधा अंश कुकुरलाई र आधा अंश श्रीमती चम्पाको नाममा लेखिदिएका छन्।
किसान ओम नारायण आफ्ना छोराको व्यवहारबाट धेरै दुखी थिए । किसानले कानुनी कागज बनाए जसमा आफुले पालेको कुकुरलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरेका छन्। ५० बर्षे किसान ओम नारायण वर्माले आफ्नो इच्छामा लेखेका छन् कि मेरी श्रीमती र घरपालुवा कुकुरले मेरो सेवा गर्छन् त्यसैले यिनीहरु नै मेरा प्रिय हुन् । मेरो निधन पछि मेरो सम्पत्तीको हकदार श्रीमती चम्पा वर्मा र एउटा कुकुर हुनेछ । कुकुरको सेवा गर्ने व्यक्ति सम्पत्तिको अर्को उत्तराधिकारी हुनेछ ।
किसान ओम नारायण वर्मा भन्छन् कि पारिवारिक विवादका कारण रिसाउँदै उनले आफ्नो पाल्तु कुकुरलाई २ एकड जग्गा दिएका छन्। परिवारमा उसको हेरचाह गर्नेले उसको सम्पत्ति पाउनेछ।
अन्तत चेली तामाङले यो संसार छोडिन् महान श्रीमान बशन्त जसले श्रीमती बचाउन करोड सके, मलेसियाको जागिर छोडेर आए (भिडियो हेर्नुस्)
November 20, 2020 admin समाचार 20549
लक’डाउनमा ला’जमर्दो भिडियो, हेर्नुहोस कसरि छा’डा भए नेपाली युवायुवती (भिडियो सहित) पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अहिले विश्वमा धेरै मानिसहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन । जस्ता फेसबुक यु ट्युव टिक
November 2, 2020 admin समाचार 4957
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपुतको निधन पछि सुशान्तकै परिवारको साथमा अटल रहेकी अंकिता लोखंडेले आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गर्दै उनीसंग वर्तमान अवस्था प्रति माफी मागेकी छन् । यो कठिन समयमा, उनको प्रेमी विक्की जैनले उनलाई पुरा
बिदेशबाट श्रीमानले गो,प्य भिडियो बनाएर देखाउ भनेपछि,श्रीमति अति भयो भन्दै मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस )
November 12, 2020 admin समाचार 3714
LEX 18 agenda conversation: Job club (544583)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515033)
Hello world! (435999)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398446)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131868)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109021)